Afo maimaim-poana ho an'ny PC - Sintomy amin'ny Windows 10 & Mac - Lalao
Ianao ve mitady hametraka Afo maimaimpoana amin'ny PC-nao?Eny. Ary androany dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Izahay dia nanamboatra lahatsoratra feno ho anao ao amin'ny Free Fire izay hahitana torolàlana tsikelikely hametrahana Free Fire. Noho izany, amin'ny faran'ny lahatsoratra dia hanana hevitra feno momba ny Garena Free Fire ianao.
Azonao atao ve ny mampiasa Free Fire amin'ny PC?
Ny Free Fire dia lalao iray hafa mifototra amin'ny foto-kevitra Battle Royale. Ity lalao ity dia novolavolain'ny orinasa Garena ary misy amin'ny android / iOS / PC. Hetsika miorina amin'ny oktana avo lenta sy sary mahafinaritra no mahatonga ity lalao ity ho iray amin'ny tsara indrindra amin'ny tsena.Ny Free Fire no lalao voalohany natomboka tao amin'ny Play Store hahafahan'ny mpilalao finday milalao battle royale. Tena mahazatra izany, ary afaka mitsambikimbikina ianao ary milalao amin'ny fotoana tianao.
Ahoana ny fomba ahazoana afo maimaim-poana amin'ny PC-nao?
Satria tsy manana emulator ofisialy ny Free Fire, dia mila mampiasa BlueStacks isika hisintomana ny lalao. Noho izany ny fizotry ny fisintomana dia mitovy ho an'ny Windows sy MAC. BlueStacks dia Android Emulator izany dia hisandoka ho fitaovana Android amin'ny PC anao ary hahafahanao mampiasa ny fampiharana Android rehetra tsy misy fetra.
Torolàlana isaky ny dingana hahazoana Fire Free amin'ny PC:
Kitiho eto hampidina ny kinova ofisialin'ny BlueStacks.
Mandrosoa BlueStacks ary fenoy ny fizotran'ny fisoratana anarana, izay tena mitovy amin'ny fiasan'ny fitaovana android.
Mandehana any amin'ny Play Store ary tadiavo ny Garena Free Fire ary apetraho ny lalao, mila fotoana kely izany satria manodidina ny 2.3 GB ny fisie lalao.
Raha vantany vao vita ny fametrahana dia sokafy ny lalao ary ampanjifao ny fatorana lakile araka izay itiavanao azy, ary amboary ihany koa ny sary mifanaraka amin'ny safidinao.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Fire Free:
Noho izany, mety mieritreritra ianao hoe, inona ny battle royale? Mba handresena ny lalao dia tokony ho ny tsara indrindra ary handresy ny mpilalao rehetra hitaky ny laharana # 1. Hisy mpilalao 50 hafa hifaninana aminao hitaky ny anaram-boninahitra # 1, saingy mila mitandrina ianao ary mandrafitra ny drafitry ny lalao. Mba hahatonga ny zavatra hahaliana kokoa, ny Afo maimaimpoana dia manana vanim-potoana maharitra iray volana eo ho eo. Noho izany, mety nahazo lalim-paka momba ilay lalao ianao.
Misy sari-tany telo lehibe hisafidianana an'i Bermuda, Purgatory, ary Kalahari. Bermuda no heverina ho tsara indrindra amin'ireo sari-tany misy satria ny roa hafa dia somary vaovao ihany, ary mbola taraiky ihany koa amin'ny endriny. Bermuda no manana ny sary tsara indrindra misy ary noho izany dia maro ny mpilalao no mihevitra an'i Bermuda ho sarintany voalohany. Ary koa, Bermuda no manana dobo be mpandroba indrindra amin'ny lalao, jereo hendry fa miorina amin'ny faritra tropikaly izany. Na ny Purgatory aza dia manana endrika mitovy ihany, fa i Kalahari dia miorina amin'ny faritra efitra kokoa.
Afaka midina miaraka aminao sy ny namanao ianao ary avy eo anjaranao ny misafidy ny paikady tsara indrindra ho an'ny lalao, azonao atao ny miandry sy mandroba mandra-pahatongan'ny fahavalo aminao, na azonao atao ny mamono ireo fahavalo ireo amin'ny fananana voalohany ary tompony ny fananany. Ity paikady ity dia mety ho fantatra amin'ny hoe mihazakazaka, fa ny paikady teo aloha dia fantatra amin'ny hoe lasy; ireo ihany no paikady roa fampiasan'ny olona, ​​famonoana ny fahavalo, na lasa rembiny.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny lalao dia manana mpilalao 50 isaky ny lobby fotsiny izy fa tsy ilay 100 nentim-paharazana, noho izany dia mila fotoana kely kokoa hamitana lalao, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny lalao handany fotoana ianao. Mahazo fiara mandeha haingana ihany koa ianao hihodina amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa rehefa mitifitra anao malalaka ny fahavalo. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny lalao dia ny fanaingoana ny toetra, satria milalao amin'ny fahitana olona fahatelo ianao dia ho afaka hahita ny hoditra izay hotafihin'izy ireo, ny tena zava-dehibe amin'ny lalao hafa, ny antsasaky ny ambony ihany no azonao jerena. toetra, fa amin'ity lalao ity. Fanampin'izany, ny fiheverana amin'ny antsipiriany be dia be.
Lalao maodely malaza amin'ny afo maimaim-poana:
Mode mahazatra:Ity dia mpilalao mahazatra mifanohitra amin'ny maody mpilalao. Hisy 50 ny totaliny, ary mpilalao hafa hifaninana amin'ny toerana avo indrindra, tsy maintsy hifaninana ihany koa ianao hitaky ny seza fiandrianana, koa mitandrema. Azonao atao ny misafidy ny sari-tany ilainao amin'ny Purgatory, Bermuda, na Kalahari.
Lalao laharana:Tsy dia hafa noho ny lalao kilasika io, saingy misy ny fiodinana fa tsaraina amin'ny lalao ianao ary avy eo omena laharana toy ny varahina, volafotsy ary volamena, arakaraka ny ahatongavanao any amin'ny toerana ambony indrindra no hiatrehanao ny henjana sy henjana mpilalao. Fantatra amin'ny fanaovana lalao mifototra amin'ny fahaiza-manao izany. Hatao hiady amin'ireo mpilalao manana fahaiza-manao lalao toa anao ianao, ka ho matotra ny raharaha. Tsy hanana safidy hisafidy ny sari-tany araka ny fanirianao ihany koa ianao mandritra ny filalaovana amin'ity maody ity.
Rush hour:Ity fomba ity dia kinova kely amin'ny maody mahazatra. Amin'ity maody ity dia hihena be ny sarintany, ary ny mpilalao dia voafetra ho 20 fa tsy 50, ny hany tombony ho azy dia ny antsasak'adiny ho anao hamita ny lalao.
Duos:Te-hilalao amin'ny namanao iray fotsiny ve ianao? Ity no maody ho anao, ianao sy ny namanao dia hiady amin'ireo mpilalao hafa handresy ny lalao, ny lalàna dia hitovy amin'ny an'ny mahazatra fa ny mpilalao hafa rehetra koa dia ho roa.
Andia-miaramila:Azonao atao ny miara-miasa amin'ny namanao telo hamorona vondrona misy olona efatra, ary hanohitra ny hafa ianao, sahala amin'ny duos fa ankehitriny ny hafa koa ho ao amin'ny ekipa misy efatra ka tokony hifampiresaka amin'ny namanao ianao ary alao antoka fa ianao dia ny ekipa sisa velona.
Fomba hafa:Deathmatches, Cold steel, Bighead, Clash squads, Rampage, Voampanga feno, Mitifitra ary Mivavaha, Rush king. Ireo maody rehetra ireo dia azo alaina mandritra ny fotoana voafetra afa-tsy ny lalao famonoana ekipa. Amin'ny ekipa famonoana ho faty dia mety tsy hanahy ny amin'ny fahasalamanao ianao satria hovelomina indray isaky ny maty ianao, ity no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampiasana ny fikirakirana ny basy sy ny fiarovana amin'ireo mpilalao hafa.
Fitaovam-piadiana malaza indrindra amin'ny afo:
Ity lisitra ity dia tsy misy afa-tsy fitaovam-piadiana izay ilaina ho anao amin'ny vao manomboka; afaka mampiasa ireo fitaovam-piadiana ireo ianao amin'ny alàlan'ny filalaovana lalao iray ka hatramin'ny roa tsara. Raha efa nilalao ady royale hafa ianao dia aza manahy mihitsy fa afaka mandroba ireto basy ireto ianao rehefa milalao ny lalao.
Ny basim-borona malaza indrindra amin'ny lalao rehetra, eritrereto fa tsara vintana ianao raha afaka mahazo iray eny an-tananao. Amin'ity basy ity, raha afaka mamono headshot ianao, dia ho faty eo noho eo ny fahavalo. Ny hany con ho an'ity basy ity dia ny fikirakirana satria manana recoil mavesatra AK dia manjary sarotra ny mahazo tanana amin'ny lamina famafazana dia tsy maintsy mampiofana ny tenanao ianao amin'ny ekipan'ny ekipa ary avy eo mampiasa ity basy ity dia ny maody mahazatra na laharana.
kofehy mifamatotra azy:fampanginina, hoso-bava, mialoha, magazina, sakany.
Ity koa dia mety ho safidinao satria ny tifitra vatana dia mankafy be rehefa mampiasa SCAR, satria ny SCAR dia tsy manana lamina famafazana satria afaka mikendry sy mitifitra ny fahavalo ianao nefa tsy manahy momba ny lamina.
Na dia ao anatin'ity basy ity aza dia tsy mila miahiahy momba ny lamina famafazana ianao satria tsy dia misy miverina raha oharina amin'ny basy hafa. Na izany aza, mendrika ny isan'ireo basy, ka alao antoka fa manakaiky kokoa ny fahavalo ianao rehefa mitifitra mba hahafahanao mamono olona. Rehefa manomboka ny lalao ianao amin'ny vao vao manomboka, dia tokony hifidy ny hampiasa ity basy ity satria hanome anao eritreritra ratsy momba ny lalao io nefa tsy hovonoina matetika ianao.
4. Basy hafanana
Tsy dia fahita izany; mety tsy raisinao ho toy ny basy fanafihana izany, fa toy ny iray ihany.
kofehy mifamatotra azy:foregrip, sakany.
Rehefa ampiasaina tsara ity basy ity dia mety ho milina mpamono olona; Raha mitsikilo ianao dia ity no basy ho anao, miaraka amina sehatra 8X izy io hahafahanao mandefa bala amin'ny alavitra. Ny fitaovam-piadiana dia hamono haingana ny fahavalo rehetra raha afaka mamoaka headshot ianao, fa alao antoka fa mahay mametafeta ianao. Fampidirana: fampanginina, fivoahana, sakany.
Ity basy ity dia mitovy amin'ny Kar98k saingy manana hafainganam-pandeha haingana kokoa; koa, ahafahan'ny mpilalao manampy magazine fanampiny.
kofehy mifamatotra azy:silencer, montso, sehatra, magazine.
Fahasalamana:Medkits, Holatra, basy fitsaboana rehetra dia azo ampiasaina hampitomboana ny fahasalamanao.
Ireo no sokajy fitaovam-piadiana tsara indrindra azonao ampiasaina izao, anjaranao ny mampiasa SMG, basy poleta, na fitaovam-piadiana melee hafa. Na izany aza, tena mamporisika anao izahay hampiasa ny basy omena ao amin'ny lisitray.
Elite Pass for Fire Free:
Ho takalon'ny vola an-tserasera dia azonao atao ny mividy ny iray amin'ireo pass, elite ary elite bundle roa; io ihany no fomba ahafahanao mamoha hoditra sy mankafy ny lalao amin'ny fomba marina. Amin'ny alàlan'ny fidirana Elite dia hahazo diamondra iray alina ianao, hahafahanao mamaha ireo fanamby voafantina ary hahazo marika maromaro kokoa, ny fetra volamena isan'andro dia hampitomboina 100, ny anaranao dia hiseho amin'ny mena miroborobo rehefa mamono olona ianao. Ao anaty bundle elite dia hahazo tombony mitovy amin'ny pass pass ianao.
Na izany aza, ho fanampin'izany, hanokatra avatar manokana ianao, hamaky tsy ho faty mandritra ny fotoana tsy voafidy ary hamaha valisoa manokana an-taonina ihany ho an'ny bundle. Diamondra 499 no vidin'ny elite, ary diamondra 999 ny vidin'ny elite.
Tombontsoa amin'ny afo tsy andoavam-bola:
Ny fanaingoana ny toetra no tsara indrindra amin'ity lalao ity; ho azonao atao ny mahita ny satan'asa iray manontolo satria mahaliana tsara azy amin'ny antsipiriany.
Ny maody sy ny vanim-potoana dia mampientanentana ny lalao satria ny Free Fire dia mikendry ny hitondra vanim-potoana, iraka ary hoditra mahaliana bebe kokoa mba hilalao.
Free Fire dia nahazo fototra mpankafy goavambe miaraka amina fampidinana hatramin'ny 500+ tapitrisa izay mahatonga ny lalao mitaky sy mifaninana.
Ny Fire Free dia somary ambany kokoa noho ny Battle Royale hafa ary manome anao kely kokoa.
Fiaraha-mientan'ny afon'afo maimaim-poana:
Ny sary amin'ny lalao dia tsy tsara raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana hafa.
Ny karazana battle royale dia namelana tao anatin'ny roa taona lasa, ary tokony andramo ity iray ity satria io no iray amin'ny tsara indrindra amin'ity taranaka ity. Firenena maro no nandrara PUBG finday, noho izany dia mety ho safidy tsara indrindra amin'izany. Manantena ianao fa hahazo fahatakarana mazava momba ny Free Fire ary mahafantatra ny fiasa rehetra momba ny Free Fire ianao.
Raha manana fanontaniana na hevitra momba ny Free Fire ianao dia ampahafantaro anay amin'ny chatbox etsy ambany.
Netflix vs Amazon Prime Video - Fampitahana Farany
Daty famoahana, mpilalao ary fanavaozana ny Barry Season 3
manakatona fampiharana amin'ny iphone
horonantsary youtube feno maimaim-poana amin'ny Internet
mamorona kaonty netflix tsy misy carte de crédit
mijery sarimihetsika vaovao mamoaka vaovao an-tserasera maimaim-poana
disney miampy fitsarana 7 andro